एक प्रत्यक्ष भिडियो समुदाय - U लाइभ च्याटमा स्वागत छ
प्रत्यक्ष जानुहोस्, चित्र र भिडियो साझा गर्नुहोस्
U LIVE Chat तपाइँको लागि लाइभ स्ट्रिम गर्न र प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्य मिडिया साझेदारी गर्नको लागि उत्तम पेरिस्कोप विकल्प हो!
U LIVE Chat मा, तपाईंले कुनै पनि सामग्री गुमनाम रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईं आफ्नो सामग्री पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ
आफ्नो शौकबाट पैसा कमाउनुहोस्
तपाईं हाम्रो सदस्यता मोडेल मार्फत स्ट्रिमि media र मेडिया अपलोड गरेर सामग्री सिर्जना गर्न तपाईंको प्रेम मुद्रीकरण गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक मूड र घटनाको लागि रमाईलो स्टिकरहरू सहित U LIVE च्याटमा आफ्नो समयको अधिकतम सदुपयोग गर्नुहोस्। यी रमाईलो र रोमाञ्चक स्टिकरहरू मार्फत व्यक्तिगत र निजी दुवै, तपाइँका कुराकानीहरू मसालेदार बनाउन यो उत्तम पेरिस्कोप विकल्प हो। तपाईंको बोरिंग च्याटहरूलाई अलविदा भन्नुहोस् र केही उत्कृष्ट कुराकानीहरूको लागि तयार हुनुहोस्!
१00००+ प्रत्यक्ष भिडियो च्याटहरू
U LIVE Chat ले तपाईंलाई U LIVE भनिने विशेष प्लेटफर्मको साथमा उत्कृष्ट पेरिस्कोप लाइभ स्ट्रिमिङ विकल्प ल्याउँछ। तपाइँ तपाइँको दैनिक खुराक को मजा को लागी सयौं अद्वितीय लाइभ स्ट्रिमहरु र प्रसारणहरु पाउन सक्नुहुन्छ! यी अनन्त लाइभ स्ट्रिमहरू बाहेक, तपाईंले U LIVE च्याटमा धेरै सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूबाट फोटो र भिडियोहरू पनि अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
विश्वसँग कुराकानी गर्नुहोस्
80 भन्दा बढी देशका प्रयोगकर्ताहरूसँग, U LIVE च्याटले तपाईंलाई विश्वभरका नयाँ मानिसहरूलाई भेट्ने अवसर प्रदान गर्दछ। तातो केटीहरू खोज्नुहोस् र हाम्रो ठूलो, विश्वव्यापी प्रयोगकर्ता आधारको साथ अनलाइन नयाँ साथीहरू बनाउनुहोस्। तपाईं विभिन्न देशका केटीहरूसँग आफ्नो कौशल प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्नेहरूसँग रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ!
केवल प्रयोगकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् र पैसा कमाउनुहोस्। कुनै रातो टेप वा फिर्ती मुद्दाहरू छैनन्।